Ụbọchị My Pet » 7 Freaky Ihe Online dịwara nwere ike Ị N'ịbụ
site Mihaela Schwartz
7 Freaky Ihe Online dịwara nwere ike Ị N'ịbụ
emelitere ikpeazụ: Nov. 21 2020 | 2 min agụ
Onye ọ bụla nụrụ nke onye Ihọd onye ọkọdọ mkpọ n'ihi na ọ bụ na match.com n'oge ọrụ. Ị na-ekwesịghị ịbụ na gị na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị website mgbe ị na-na-arụ ọrụ. Ọ pụrụ inye a n'echiche nke na ị na-adịghị eche banyere ịnọ n'ebe, ma ọ bụ na ị na-achọghị ka a bụ ụfọdụ Atụmatụ ga-enyere gị na-gị imi dị ọcha ma na-anọ nke nsogbu mgbe ị na-akpa onye online na ị chọrọ ka-enwe ike ime nke ọma na-arụ ọrụ.
Ị ada n'azụ ọrụ gị
Iji na-amalite, ị ga-achọ mgbe nile na-na oge. Otu ihe mere ị pụrụ inweta chụọ n'ọrụ n'ihi na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị online adịghị ọbụna nwere na gị ịbụ na internet na-arụ ọrụ ịlele igbe mbata gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide na-nsogbu, elele gị ozi gị na nri ehihie ma ọ bụ mgbe ị na-ebe obibi. Atụla oge ọrụ.
Isi gị mere na-eche na ị oge gị n'iyi na internet
Ọzọ ihe na ike ejedebe na-ị chụọ n'ọrụ maka online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-achọpụta na gị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị website igbe na-arụ ọrụ. Ị na-ahụ na-arụ ọrụ, ọ bụghị ka e ịlele na gị na-elekọta mmadụ ndụ. Atule igbe mbata gị dị mkpa, ma ị ga-achọ ime ya mgbe ị na-na a ezumike ma ọ bụ oge ọzọ ka ị ghara nwere na-arụ ọrụ. Ma ọ bụghị ya, isi gị mere nwere ike na-eche na ị na-igbu oge na internet, na ga-ejedebe na-agba gị na-ego onye na- “abụghị na internet oge niile.”
Ị anya dị ka ma ọ bụrụ na ị na-ezo ihe
I kwesịkwara-enwe mgbe nile maara nke otú àgwà gị na-aghọta. Ọ bụrụ na ị na-eme strangely agbalị ekpuchi ihe elu n'ebe ọrụ, isi gị mere ga-ozugbo chee ihe, na mgbe ahụ na-a nso anya na ị. Otu mfe ileghara-na BAM, na ị na-arahụ.
Ị na-adịghị agbanwe ezuru
N'ịbụ mgbanwe na-ihe ọzọ dị mkpa nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị online na-enwe ihe ịga nke ọma azụmahịa ndụ. Ị nwere ike re-ndokwa gị oge a bit, ma ọ bụrụ na gị na onyeisi n'ezie kwesịrị ihe mere, -eme ka oge maka ya ma ọ bụ ya.
Ị adịghị elekwasị anya na-arụ ọrụ gị
I kwesịkwara ntị mgbalị ị na-etinye na. Mgbe ị na-eche echiche banyere ihe unu ga-eyi na-ekpo ọkụ ụbọchị i nwere n'abalị a, ị na-agaghị na-elekwasị anya na ọrụ gị, ma ọ bụghị na-etinye na gị zuru nwere.
Ị badmouth were gị n'ọrụ online
Ọzọkwa, ị kwesịrị ị na mgbe badmouth ụlọ ọrụ, ọbụna gị online ụbọchị. Ọ bụrụ na gị na ụlọ ọrụ chọpụtara banyere nke a, ọ pụrụ iduga gị mgbasa si ọrụ gị, na ọ dịghị onye chọrọ na. Na-niile electronic kwuru banyere gị n'ebe ọrụ nti.
Ị mix na ndị ọjọọ ndị mmadụ
Egbu, i kwesịrị nnọọ n'ozuzu na-agbalị-anọ nke nsogbu. Ịgwakọta na ndị ọjọọ ụdị ndị pụrụ iduga gị ịlụ chụọ n'ọrụ. Ndị a gasịrị Atụmatụ ga-eme ka ị ịga nke ọma ma gị ihunanya na ọkachamara ndụ.
Gịnị gị Anu ulo Banyere Gị
Na Rebound – Ọ online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ụzọ ziri ezi isi na-aga?
3 Ihe Kpatara ghara Were gị nwa nkita On A mbụ Ụbọchị
Mesie gị Ụbọchị – Uwe Ihe Ịga nke Ọma
5 Ụdị mbụ Daters. Kedu One Ị?